परिवर्तनीय बांडले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki परिवर्तनीय बन्धन
शब्द कन्वर्टिबल बांडको के मतलब छ?
मर्न परिवर्तनीय बन्धन सरलीकृत सर्तहरूमा, तपाईं पनि एक ठेक्का बांडको रूपमा विचार गर्न वा यसलाई नामकरण गर्न सक्नुहुन्छ। निगमहरूको यी बांडले सम्बन्धित कम्पनीलाई एक पूर्वनिर्धारित पूंजी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरूलाई उपयुक्त सर्तहरू चाहिन्छ। यस राजधानीको पुनर्मिलनको लागि निश्चित निश्चित अवधि तय गरिएको छ। कडा रूपमा बोल्नु, यो परिवर्तनीय बांड लगभग ऋण वा ऋण बाहिर लैजान सामान्यको बराबर छ। तथापि, कन्वर्टिबल योग्य कम्पनीले कम्पनीको लागि स्पष्ट फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, जसको अर्थ लगभग सबै सार्वजनिक सीमित कम्पनीहरूले यो प्रकारको लगानी प्रयोग गर्न चाहन्छन्। यो सम्भावना ऋणबाट तथापि, आफ्नो आफ्नै वित्तपोषणको लागि प्रयोग गर्नु पहिले कम्पनीको सामान्य बैठकमा तीन-चौथाई बहुमत चाहिन्छ। केवल यस अवस्थामा अन्तर्गत परिवर्तनीय बांडको प्रयोग हुन सक्छ।
शब्द कन्वर्टिबल बांडमा के अर्थले परिवर्तन गर्छ?
शब्द परिवर्तनीय बांड शब्द "परिवर्तनीय बांड" बाट बनेको छ। यस पाठको माथिल्लो भागमा, शब्द ऋण पहिले नै उल्लेख गरिएको छ। अब, शब्द परिवर्तनलाई बढी विस्तारमा छलफल गर्न सकिन्छ। निगम द्वारा प्रयोग गरिएको कर्जा पूंजी समय सीमा समाप्त भएपछि वा पहिले सहमति भएको अवधिको अन्त्य पछि परिवर्तित हुन सक्छ। यो शेयरहरूको रूपमा हुन्छ। यसको मतलब यो छ कि ऋण पूंजीको रकमले यस कम्पनीको शेयरको शेयर उच्च लगानीकर्ताको लागि हो भनेर निर्धारण गर्छ। त्यसैले एक भन्न सक्छ कि लगानीकर्ता व्यावहारिक रूपमा अस्थायी रूपमा कम्पनीको एक भाग खरिद गर्दछ। यद्यपि, यस भुक्तानी अवधि वा चुकौती अवधिमा यो कम्पनीको शेयरहोल्डर होइन, यो राशि ऋण पूंजीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो म्याद सकियो मात्र यो अवधि पछि ऋणलाई शेयरमा बदल्न सकिन्छ। यस बिंदुबाट, लगानीकर्ता सम्बन्धित स्टक निगमको शेयरधारक हो। यो मुख्य सामान्य बैठकमा एक तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त गर्न को लागी मुख्य कारण मध्ये एक हो।
सार्वजनिक कम्पनीहरूको लागि यस्तो ब्यान्डको फाइदाहरू के हुन्?
परिवर्तनीय बांडको लागि फाइदा मुख्यतया ब्याज दरको स्तरमा हुन्छ। एक परिवर्तनीय बांडमा ब्याज दर को लागी ब्याज दर को सामान्यतया बैंकमा सामान्य भन्दा कम छ। यसको अर्थ जुन निश्चित निश्चित अवधिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन लगभग एक देखि दोहोरिएको छ। यसैले, यस अवस्थामा, एक पनि अस्थायी सम्बन्ध बोल्न सक्छ, जो लगानीकर्ता को ओलम्पस संग तिर्नुभएको छ। यद्यपि, यो मात्र लागू हुन्छ यदि कर्जा निर्दिष्ट समय भित्र भित्रिएको छ। यदि यो मामला होइन भने परिवर्तनको संभावना विचार गर्न सकिन्छ। तथापि, स्टक निगम र लगानीकर्ताले यो पनि सहमत हुनुपर्दछ।
परिवर्तनीय बांडमा निष्कर्ष
परिवर्तनीय बांडको समापन लगभग समग्रमा पूर्ण रूपमा सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ। यस प्रकार को एकमात्र नोकसान सामान्य बैठक मा तीन-चौथाई बहुमत मा अग्रिम प्राप्त गर्न को लागि संचालित समय आवश्यक छ। नियमको रूपमा, धेरै सार्वजनिक सीमित कम्पनीहरूले आन्तरिक सम्झौता खोज्न धेरै समय बिताउनु पर्छ। केहि परिस्थितिहरूमा, यो एक महत्वपूर्ण हानि हुन सक्छ। तथ्याङ्कको लागि, तथापि, हामीसँग अझै पनि फाइदाहरू छन् जुन यस्तो ब्यान्डमा प्रवेश गर्दछ। सबै भन्दा माथि निस्सन्देही, कम ब्याज दर यहाँ विचार गरिनु पर्छ। यी लगभग सबै सार्वजनिक सीमित कम्पनीहरूको मुख्य तर्क यो विकल्पको लागि विकल्प छनौट गर्न। यसरी, यो आश्चर्यजनक छैन कि धेरै कम्पनीहरूले यो विकल्प प्रयोग गर्छन्।
अर्को लेखएएए क्रेडिट